Dowladda Gaaboon Oo Sheegtay in ay Fashilisay Inqilaab Melleteri.
Monday January 07, 2019 - 17:37:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Gaaboon ayaa ku dhawaaqday in ay fashilisay inqilaab melleteri oo saaka ka dhacay magaalada Libreville ee caasimadda u ah wadankaasi.
Cali Boongo ayaa afgambi ka badbaaday
Wararka ka imaanaya Gaaboon ayaa sheegaya in ciidamada daacadda u ah madaxweyne Cali Boongo ay dib ula wareegeen talada wadanka saacado kadib markii Jeneraallo hubeysan ay qabsadeen qasriga madaxtooyada iyo idaacadda Afka dowladda ku hadasha.
Guy Bertrand Mapango oo ah Afhayeenka Rasmiga ah ee xukuumadda Gaaboon ayaa u sheegay warbaahinta in ay gacanta ku dhigeen inta badan Jeneraalladii Afgambiga soo agaasimay islamarkaana xaaladdu caadi kusoo laabatay.
Goob joogayaal ku sugan magalada Libreville ayaa sheegay in rasaas xooggan iyo madaafiic ay maqleen maanta barqadii kadib markii ay isku dhaceen ciidamada dowladda iyo saraakiisha Inqilaabka.
Cali Boongo oo qoyskiisu talada hayaan ku dhowaad 50 sanadood xiriir ah ayaa socdaal caafimaad kujira wadanka Marcco, Ururka Midowga Afrika ayaa bayaan uu soo saaray si kulul ucambaareeyay isku dayga Inqilaab ee ka dhacay wadanka Gaaboon.